TOMBO-KASE – filazantsaramada
Publié parfilazantsaramada	 juillet 11, 2014 Laisser un commentaire sur TOMBO-KASE
« Ao aminy koa hianareo, rehefa renareo ny tenin’ny fahamarinana, dia ny filazantsara famonjena anareo, -eny, ao aminy koa hianareo, rehefa nino, no nasiana tombo-kase tamin’ny Fanahy Masina araka ny teny fikasàna. » (Efesiana 1:13)
Fitaovana iray entina manamarika fifanekena ny TOMBO-KASE. Maro no azo ilazàna azy io saingy izay kely indrindra no asehontsika eto. Famantarana manokana, manome lanja lehibe ny zavatra iray nifanekena no tena ahalalàn’ny maro azy. Tsy dia fampiasa amin’ny andavanandrom-piainan’ny olona izy saingy amin’ny fotoana iray ampiasàna azy dia toa manambara zava-dehibe miavaka amin’ny fiainana izany. Matetika dia any amin’ny birao no ahitana sy ampiasàna ny tombo-kase. Raha adika izany dia toa olona manam-pahefana no afaka mampiasa azy ary izay mitondra ny taratasy voaisy tombo-kase dia manana fahefàna araka izay voatondro ao anatin’ilay taratasy. Rehefa asiana tombo-kase ohatra ny valopy iray dia milaza izany fa tsy azon’iza n’iza sokafana afa-tsy izay manana alalana hanokatra azy. Rehefa akaton’ny fanjakana ihany koa ohatra ny trano na birao iray ka asiany tombo-kase dia izy tompom-pahefana ihany no afaka miverina mamoha izany.
Manana tombo-kase tsy voakosok’iza n’iza Andriamanitra Raintsika; dia ny FINOANA an’i Jesosy Kristy Tompo maty ho antsika nefa nitsangana ho velona mandrakizay sy mitoetra eo an-tanana ankavanany izany. Izay fananany rehetra dia tombohany kase amin’ny alalan’ny rà soan’i Jesosy mba ho marika fa Izy no Tompony; ary fahefan’Andriamanitra irery no afaka mametaka na manaisotra izany. Ny mahafaly ny Tompo indrindra ry havana dia ny fahatsapantsika tsirairay fa ny voalohany sy ny tena izy amin’ireny fananany ireny dia izaho sy ianao « mpanota mahantra ». Misy olona mety mahay mahatsapa ny fahalemeny sy ny maha-tsinontsinona ny tenany va? Tsia! afa-tsy izay tarihin’ny Fanahy Masin’Andriamanitra irery ihany ka voasoratra ho zanany tamin’ny alalan’ny Batisa masina. « Fa izay tarihin’ny Fanahin’Andriamanitra no zanak’Andriamanitra » (Rom. 8:14). Tsy misy hafa ankoatra an’Andriamanitra ka afaka mamaha izay asiany tombo-kase; ary izany asa lehibe izany dia tanterahiny amin’ny alalan’i Jesosy Kristy zanany lahitokana. Manao ahoana sy tahaka ny inona anefa hoy ianao ny fitiavan’i Kristy antsika? Jereo fa nomeny anjara tamin’izany fahefàna nomen’ny Ray Azy izany koa isika rehetra. Hoy Jesosy Tompo: « Lazaiko aminareo marina tokoa: Na inona na inona fehezinareo ety ambonin’ny tany dia hofehezina any an-danitra; ary na inona na inona vahanareo ety ambonin’ny tany dia hovahana any an-danitra. » (Matio 18:18). Ny fahefàna nomen’Andriamanitra an’I Jesosy dia nanomezany ho antsika ihany koa. Ary, raha mino aza isika; dia tsy sombintsombiny fa tena fahefàna feno tokoa no raisintsika avy Aminy. Io Finoana velona an’i Jesosy Kristy Tompo io, no TOMBO-KASE hiarovana antsika tsy ho viravirain’i satana ka hahatonga fahafatesana ho antsika. Ao anatin’izany rehetra izany dia tonga manana fahefàna lehibe tokoa ny mino rehetra. Fanomezana avy amin’i Jesosy izany satria hoy Izy: « Indro, efa nomeko fahefana hanitsaka menarana sy maingoka sy handresy ny hery rehetra ananan’ny fahavalo hianareo, ka tsy hisy hampaninona anareo akory. » (Lioka 10:19)
Ry sakaiza tsara indrindra ao amin’i Jesosy: « Koa ny finoana dia avy amin’ny tori-teny, ary ny tori-teny kosa avy amin’ny tenin’i Kristy. » (Romana 10:17). Raha mby, efa tonga eo aminao sy ny tokan-tranonao ary ny firenenao ny Tenin’Andriamanitra; dia tsarovy fa sabatra ho anao izany, mba ho fiadiana entinao mandresy ny ratsy rehetra. Efa nasian’Andriamanitra tombo-kase tamin’ny ràn’i Jesosy ianao ka manana anjara Aminy. Koa: « Fa na iza na iza mitandrina ny teniny, dia tanteraka ao aminy marina tokoa ny fitiavana an’Andriamanitra; izany no ahafantarantsika fa ao aminy isika. » (1Jaona 2:5). Mibebaha àry! Ndeha hiverina amin’ny fitiavana voalohany, dia ilay fitiavan’ i Kristy antsika hatramin’ny taloha sy hatramin’izao ary mbola haharitra mandrakizay. Ho aminao ny fiadanan’ny Tompo. Amen!
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao.
Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny « leave a comment » eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny « enter your comment here ».
Publié parfilazantsaramada juillet 11, 2014 Publié dansUncategorized
Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana (Cours Biblique par Correspondance)